uhlobo olusha inyanga rock sitholwe Chinese mkhathi oyinyanga - Izindaba Rule
uhlobo olusha inyanga rock sitholwe Chinese mkhathi oyinyanga
Lesi sihloko osesikhundleni “uhlobo olusha inyanga rock sitholwe Chinese mkhathi oyinyanga” lalotshwa Tim Radford, ngoba theguardian.com ngoLwesibili 22 December 2015 16.04 UTC
ososayensi Chinese ziye zakhomba uhlobo olusha rock on inyanga. An unmanned Chinese mkhathi oyinyanga, umkhankaso e 2013, uye ayehlola ukugeleza wasendulo udaka ukuqhuma kwezintaba-mlilo futhi bahlonze nokumbiwa ukubunjwa konke engafani nalutho letigcogcwe osomkhathi American phakathi 1969 futhi 1972, noma nge owokugcina mkhumbi-mkhathi zaseSoviet 1976.
Izindaba, Nithumelé kusukela an wentaba nomthelela Mare Imbrium, kungenye isikhumbuzo sokuthi ukuhlola amaplanethi ayisekho edliwa abaseRussia, amaMelika noma European Space Agency: Japan, India neChina baye zonke umkhankaso iziphuphutheki kwenyanga on namarokhethi zabo siqu. Britain umkhankaso satellite ayo, Prospero, on rocket yayo siqu, Black Arrow, kweyabantu kwethulwa endaweni yalo e Woomera, Australia, in 1971 bese ngesula emncintiswaneni isikhala.
Related: Kuyokwenzeka nini abantu babuyele inyanga? podcast
Kusukela ekupheleni isimiso Apollo, lososayensi baye baqhuba ucwaningo lwabo kwenyanga ikakhulukazi iziphuphutheki. Chang'e-3, unmanned mission China sika oyinyanga, lizoqeda rover esibizwa Yutu noma "Jade Rabbit" on a isencane lava flow. Lokhu rover sebewenza ukukhomba imfihlakalo mineralogical enyangeni, a basalt nge "izici compositional esiyingqayizivele."
Isifundo, kwabikwa kuyi Nature Communications, kulindeleke ukuba ngcono ukufunda zomculo satellite, futhi aphonse ukukhanya entsha on umsuka umakhelwane Zomhlaba eliseduze.
Inyanga Kucatshangwa ukuthi kwakhiwa uma into Mars-sized ishayisa iplanethi enguMhlaba ngasekuqaleni komlando sonozungezilanga. Uma izicucu zezinsimbi zanda kusukela bashayisana coalesced futhi selehlile, kodwa izakhi radioactive ekujuleni ingaphakathi lishise idwala ngaphansi kuqweqwe, futhi 500 iminyaka million kamuva, lava ukuqhuma kwezintaba-mlilo slurped ku nomthelela asemigodini enyangeni ukwakha okubizwa ngokuthi "wezilwandle" noma maria.
Izinsimbi Yutu rover waqala kokuhlola lava ukuthi cishe eyayigeleza mayelana 3 sekuyiminyaka eyizigidi eziyizinkulungwane ezingu edlule. Zathola ngeke ugcine abayizakhamuzi ezejwayelekile baphapheme ebusuku, kodwa kuba isimanga ososayensi amaplanethi. Geochemists kungaba lungisa umlando idwala flow sika kusukela mix mbala amaminerali udaka selehlile. Basalts banambitha by astronaut uhambo noma eqoqwe by uphenyo waseSoviet Luna zazivame okumelwe ahlukaniswe kubo ngezindlela ezimbili: kungaba okusezingeni e titanium, noma eliphansi kakhulu.
Related: Private isikhala uhlanga ebutha ijubane
Kodwa uthole yakamuva wabika ukufika kuqala soft the Moon in 40 zeminyaka kokubili Lesisemkhatsini titanium kokuqukethwe kanye okunothe oxide.
"Izinhlobo zezinto lisitshela ukuthi isiphuku Moon engenhla kuyinto umfaniswano ingasaphathwa ukubunjwa kuka Womhlaba. Futhi ngokuqhathanisa chemistry ne age, singabona kanjani mlilo inyanga yashintsha ngokuhamba kwesikhathi,"Kusho Bradley Joliff we Washington University of St Louis, okuwukuphela umlingani American in the team Chinese.
The mix amaminerali magma acoce indzaba: ukuthi kungenxa yokuthi namaminerali ancibilikile Izici crystallize ngaphansi kwamazinga ahlukahlukene okushisa. Ngakho rock on the surface abahambisele tinkhomba emaqaqasini ezijulile iplanethi.
"Lo variable titanium ukusatshalaliswa on the surface kwenyanga kusikisela ukuthi ingaphakathi Moon kwakungalindelekile homogenised,"UProfesa Joliff wathi. "Sisebenza basazama ukuthola ukuthi lokhu kwenzeka kanjani."
← New ezihlukahlukene zofuzo theory angase bazivulele indlela eya ekuqondeni kokuhlakanipha kwabantu The best iPhone and iPad imidlalo 2015 →